पीडाभित्र लुकेको खुसी – Janasamsad
बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ १२१८०१
जीआर धिताल ।
मेचीनगर । झापाली क्रिकेटले विगतदेखि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ । झापामा पनि काँकरभिट्टाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै लाक्पा लामा, मनोज कटुवाल, सन्नी पुनलगायतका खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिस्तरमै आफ्नो नाम लेखाएका छन् । क्रिकेटमा महिलाको उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउने क्रममा रुविना क्षेत्रीले राष्ट्रिय व्रिकेट टोलीको नेतृत्व प्राप्त गरिन् । रुविनालाई काँकरभिट्टाका अन्य महिला खेलाडीले राम्रो साथ दिए । अहिले नेपाली महिला क्रिकेटको राष्ट्रिय टिमका अधिकांश खेलाडीहरु काँकरभिट्टाकै छन् ।
गत पुसमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नं. १ ले जित्यो । त्यो जीत केवल जीतमात्रै थिएन्, प्रदेश नम्बर १ ले महिला क्रिकेटमा दर्ता गरेको ऐतिहासिक जित थियो । तीनै महिला क्रिकेट खेलाडीहरु प्रदेश १ लाई जिताउने टिममा थिए । जो कोरोना कहरकाबीच कहिले खाली कालोपत्रे सडक त कहिले काँकरभिट्टा आसपासमा भेटिने खाली जमिनमा बल र ब्याटिङसँग पौँठेजोरी खेल्दै गरेको देखिन्थ्यो ।
प्रदेश १ को यस्तो थियो उपाधि यात्रा
प्रदेश १ ले प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जित्दा फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ माथि ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको थियो । फाइनल खेलमा एपीएफलाई अन्तिम ६ बलमा १३ रन चाहिँदा ५ विकेट हातमा थिए । तर, नगद ५ लाख हात पार्ने एपीएफको सपना तुहाउन स्पिनर संगीता राईले २ विकेट लिँदै ६ रन खर्चेपछि एपीएफ उपविजेतामा खुम्चिन बाध्य भयो ।
बाग्मती प्रदेशलाई ४६ रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको प्रदेश १ ले दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमलाई ५ विकेटले हराएको थियो । तेस्रो खेलमा गण्डकीलाई ७ रनमै अलआउट गरेको प्रदेश १ समुह ‘बी’ विजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गर्यो । सेमिफाइनलमा समूह ‘ए’ को उपविजेता लुम्बिनीलाई १० विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश १ टिमले फाइनलमा स्थान बनाएको थियो ।
यस्ता प्रशिक्षक, जो दैनिक १२ घण्टा मैदानमा हुन्छन्
कुशल गुरु हरेक क्षेत्रका लागि आवश्यक छ । हरेक सफलताको पछि असल उत्प्रेरक, प्रशिक्षकको भूमिका आवश्यक छ । झापाको मेचीनगरस्थित सुदूरपूर्वी सहर काँकरभिट्टामा रहेर विगत दुई दशक लामो समयदेखि नेपाली क्रिकेटको उत्थानका लागि गाउँगाउँबाट खेलाडी उत्पादन गरिरहेका कुशल प्रशिक्षकको नाम हो, विरु श्रेष्ठ । उनले स्थापना गरेको मिलन क्रिकेट एकाडेमीले हालसम्म हज्जारौँ खेलाडी उत्पादन गरिसकेको छ । हालकी कप्तान रुविना क्षेत्रीदेखि गाउँगाउँमा उब्जिएका खेलाडी उनकै क्लवको देन हो ।
प्रशिक्षक श्रेष्ठ क्लवका अध्यक्ष हुन् । उनकै मेहनत र खेल कौशलका कारण यहाँका खेलाडी राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सुरुवाती चरणमा क्रिकेट महिलाले खेल्ने खेल होइन भन्ने गलत सोचसमेत परिवर्तन भएको छ । अहिले अभिभावकले खेलको महत्व बुझेका छन् । खेलाडीहरु प्रशिक्षणमा आउने क्रम बढ्न थालेको छ । हाल दैनिक ५५ जना महिला खेलाडी क्लवमा जोडिएर नियमितरुपमा खेल अभ्यासमा छन् । प्रशिक्षक श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा मौलाएको क्रिकेट क्षेत्र आगामी दिनहरुमा अझै बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
रुविना क्षेत्री नेपाली महिला क्रिकेटका लागि सुपरिचित नाम हो । विगत १२ वर्षदेखि क्रिकेटमा होमिएकी कप्तान रुविनाले अहिले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । उनकै मेहनत र लगावले नेपाली क्रिकेट दिनदिनै झाँगिदो अवस्थामा छ ।
काँकरभिट्टामा रहेको मिलन क्रिकेट क्लव उनले क्रिकेट सिक्न सुरु गर्दादेखिको एकेडेमी हो । घरमा रहँदा उनी दैनिक अभ्यासमा जाने क्लव पनि सोही एकाडेमी हो । उनी विभागीय टिम एपीएफबाट व्यावसायिक क्रिकेट खेल्दै आएकी थिइन् । एपीएफको कप्तानी बनेर मैदानमा उत्रदा प्रदेशका क्लवहरुले कहिल्यै उपाधि जित्न सकेनन् ।
सोही कारण ५ वर्षअघि एपीएफ छोडेर उनी प्रदेश १ को महिला टिमको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगिन् । उनी आएपछि समेत प्रदेश १ ले ४ पटकसम्म प्रधानमन्त्री कपको उपाधि एपीएफलाई बुझायो । तर, यो पटक कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउन प्रदेश १ महिला क्रिकेट टिमका लागि अवसर बन्यो । प्रदेश १ महिला टिमका खेलाडी कहिले खाली सडक त कहिले चिया बगानको खाली मैदानमा बलिङ र ब्याटिङ गर्दै गरेको भेटिन्थे । ‘आज तिनै कोरोना कालमा हामीले दिनरात गरेको मेहनत र खटाइको बल्ल मूल्यांकन भयो,’ कप्तान रुविनाले भनिन्, ‘तर हामीले जति मेहनत गर्यौँ र हामीले आफ्ना फ्यान बाहेक अरुलाई सायद खुशी दिन सकेनौँ जस्तो लाग्छ ।’
कप्तान रुविनाले प्रधानमन्त्री कपको उपाधि जितेर गृहनगर फर्किएपछि यहाँका स्थानीय संघसंस्थाले सम्मान गरेर आफुहरुको हौसला बढाउने काम गरेकोमा आभार व्यक्त गरिन् । तर, आफ्नै नगरपालिकाले खेलाडीहरुकोे महत्वलाई बुझ्ने र समस्याहरु सुन्न चासो नै नदेखाएकोप्रति कप्तान रुविनाले दुुःख व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कप जितेर घर फर्किएको महिला क्रिकेट टिमलाई नगरपालिकाले सम्मान त के बधाइ दिनसमेत कन्जुस्याँइ गरेको रुविनाको टिप्पणी छ । ‘हाम्रा मेयर, उपमेयरले हामीसँग के कस्ता समस्याहरु छन् भनेर सोध्नु त के, हामीले आफ्ना समस्या सुनाउनका लागिसमेत उहाँहरुसँग समय छैन्’, रुविनाले भनिन् ।
उनले थपिन्, ‘स्थानीय सरकारले सोचेजति सहयोग नगरे पनि हामीले आफ्नो आत्मविश्वासमा कमी ल्याएका छैनौँ । नेपाली महिला क्रिकेटलाई माया गर्ने फ्यानको मायाले हामीलाई सधैँ उर्जा भरेको छ, हाम्रो प्रेरणाको श्रोत नै हाम्रा फ्यानहरु हुन् ।’
अझै राम्रो गर्न मन छ
‘काजल श्रेष्ठ’ नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी अर्की भरपर्दो खेलाडी हुन् । प्रदेश १ टिमलाई ऐतिहासिक उपाधि जिताउन उनको महत्वपूणर् योगदान छ । उनको विचारमासमेत आफूहरुले पीएम कपको उपाधि जित्नुमा कोरोनाकालको लकडाउनले ठुलो सहयोग गरेको बताउँछिन् । सानै उमेरदेखि क्रिकेटमा होमिएकी काजललाई नेपाली महिला क्रिकेट टिमका लागि अझै धेरै गर्ने चाहना छ । ‘देशका लागि धेरै गेम खेलेँ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाललाई अझै धेरै खेलहरु जिताउने इच्छा छ,’ उनले भनिन् ।
अहिलेका नयाँ खेलाडीहरुको आगमनले आफुहरुलाई हौसला थपेको उनले सुनाइन् । अहिलेको जस्तै अवस्था रहने हो भने नेपाली महिला क्रिकेटले फड्को मार्ने उनको विश्वास छ । अन्य खेलाडी जस्तै उनको समेत सबैको साथ रहँदासमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको माया कम पाएको उनको बुझाइ छ ।
गलत ठाउँमा जन्मियौँ कि जस्तो लाग्छ
नेपाली महिला क्रिकेटको उर्वरभूमि काँकरभिट्टाका अधिकांश किशोरीहरु क्रिकेटमा लागेका छन् । यहाँका खेलाडीहरुको प्रदर्शनले सिंगो देशले नै क्रिकेटमा सफलता पाइरहेको छ । तर, तिनै खेलमा सहभागी खेलाडीहरु भने आफ्नै ठाउँ र यहाँ सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरिदिँदा मन दुखाउन बाध्य छन् ।
प्रदेश १ लाई जिताउँन महत्वपूणर् भूमिका खेलेकी अर्की खेलाडी रोमा थापाको समेत गुनासो एउटै छ कि हामीलाई यहाँको नगरपालिका र जनप्रतिनिधिले वेवास्ता गरे । ‘कहिले काहीँ त यहाँ खेल मन पराउने मान्छे नै छैनन् कि जस्तो लाग्छ, जब एकेडेमीमा पुग्छौँ यी सबै कुरा बिर्सिन्छौँ र फेरि अभ्यासमा व्यस्त हुन्छौँ’, रोमाले सुनाइन् ।
सिनियरको राम्रो सपोर्ट छ
कुनै पनि सफलताको पछि अग्रजको अनुभव र साथको जरुरी रहन्छ । नेपाली महिला क्रिकेटमा नयाँ खेलाडीहरुको उपस्थिति उत्साहजनक छ । पुराना पुस्ताका खेलाडीलाई विस्थापित गर्न नयाँ पुस्ताको तयारी आवश्यक रहँदा काँकरभिट्टामा रहेको मिलन क्रिकेट क्लबमा हरेक दिन नयाँ-नयाँ खेलाडीहरुको आगमन हुने गरेको छ । यो नेपाली क्रिकेटका लागि खुशीको कुरा हो । प्रदेश १ टिममा निंग्मा तामाङ, एलिसा खडिया, स्मृति कटुवाल जस्ता नयाँ पुस्ताका सम्भावना बोकेका खेलाडीहरु हुन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा सम्झनलायक खेलाडीको अर्को नाम हो, संगीता राई । प्रतियोगिताभर प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट बनेकी प्रदेश १ की संगीताले नगद २१ हजार रुपैयाँ हात पारिन् । संगीताले फाइनलमा ३ विकेटसहित प्रतियोगिताभरमा कुल १४ विकेट लिन सफल भइन् । प्रदेश नं. १ टिममा झापा मेचीनगरका मात्र १२ जना खेलाडी सहभागी थिए ।